Shirkii Saxiixayaasha oo la soo gabagabeeyey iyo Siyaasiga Cabdikarim Xasan Jaamac oo Sheegey in lagu been abuurtey – idalenews.com
Magaalada Nairobi oo uu shir 2 maalin ah uga socdey madaxda roadmap ayaa gabagabadii shirka soo saarey war murtuyeed ay ku qoran yihiin 8 qodob oo ay ku heshiiyeen. Madaxweynaha iyo Wakiilka Ahlu Sunnah ayaa ka maqnaa shirka ka dib markii uu shaley ka soo baxey soona gaarey Muqdisho.
Qodobo Muhiim ah oo ee war saxaafadeedka u xusnaa waxaa ka mid ah:
2. Saxiixayaashu waxay isku raaceen sidii hore loogu qorsheeyey Heshiiskii Garoowe in ay ku socoto soo xulidda 275 xildhibaan ee baarlamaanka iyo kuwa Aqalka Sare, ka hor 20ka Agoosto (2012). Arrinta la xiriirta heerka waxbarasho ee xildhibanaada waxay noqonayaan in ay haytaan dugsi sare iyo khibrad, ama aan ka soo bixin Dugsi Sare oo leh khibrar. Hadduu muran ka yimaadona waxaa go’aan ka gaarayay Guddiga Farsamo ee Sooxulidda.
5. Saxiixayaashu waxay walaac ka muujiyeen nabbada & ammaanka iyo xornimada & tayo-wanaagga Guddiga Farsamo ee Soo xulidda iyo xaaladda hab shaqaynta, waxayna isku raaceen in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo arrintaas lagu hagaajinayo. UNPOS ayaa qaaday masuuliyadda arrintas ayadoo kaashanaysa AMISOM
Saxiixayashu waxay si xooggan u cambaareeyeen handadaad (nin-tooxsi) iyo laaluushka oo curyaaminaya soo xulidda Xubnaha Baarlamaanka. Waxaa reeban nooc kasta oo laaluush, handadaad iyo cabsi gelin ah. Qofkii lagu ogaado in uu soo maray nidaam sharci darro ah, waxaa laga mamnuucayaa (soo xulashada) waxaana laga qaadayaa tallaabo sharci ah.
Siyaasiyiinta & Oday-dhaqameedyada Beesha Xawaadle oo faraqa is haysta